Firefox 92 inoratidza kushambadzira kwakavharwa mune mazano | Linux Vakapindwa muropa
Ichi Chipiri, Mozilla yakakanda yazvino vhezheni yewebhusaiti yako ine hutsva hukuru hwekutsigira fomati yeAVIF. Ndinoziva kuti vamwe muchanditsoropodza ndikati handina kuishandisa kwenguva yakareba nekuti ndasarudza imwe nzira ine chikamu chidiki chepachivande, iyo Vivaldi iyo inopa zvakanyanya kuvashandisi vanoda, asi nhau dzakadai chete inosimbisa kuti kambani haizive yekuzvimisazve pachayo. Pese nhanho mbiri dzaunotora neyako Firefox, imwe inoita kunge iri kumashure.
Chinhu chekupedzisira ndeche ratidza kushambadza, kunyangwe ivo vakatora hanya kwazvo muzvinyorwa umo ivo vanotaura nezve basa racho kuti vasashandise iro izwi. Ivo zvakare vanoona kuti zvese zviri kuremekedza zvakavanzika zvedu, asi mazano ekutsvaga anosanganisira kushambadzira, chimwe chinhu chavanoedza kuwana mabhenefiti kubva kuzvibvumirano nevamwe vavo.
Firefox 92+ kushambadza kunoonekwa chete muUS
Firefox ichava nemashambadziro mune kero bar. - Parizvino muUSA chete, ivo vanozomisikidzwa nekukasira kunyangwe vachigona kumiswa kubva pazviruva. pic.twitter.com/jhdvzLzXz2
- mixx.io - technology podcast (@mixx_io) October 7, 2021
Ichi chitsva chinozivikanwa seFirefox Suggest, uye Mozilla zvinozvitsanangura sechinhu chitsva chinoshanda segwara rakavimbika kune akanakisa ewebhu uye inoratidza ruzivo rwakakodzera. Zvayo, tinoshandisa nzvimbo yedu, mazwi akakosha uye kuratidza mazano, iyo mune mamwe mazwi haisi chinhu kunze kwekushambadzira kwemunhu zvichienderana nezvedu nzvimbo uye nekutsvaga kwedu.
Zvine musoro, vashandisi havasi kufarira chitsva ichi zvachose, uye vamwe vanosarudza kubhadhara kunyorera kuti vaone mhando iyi yemazano avanouya kuzodana se "zvinotyisa". Asi chinhu chakanaka ndechekuti parizvino inongowanikwa kune vashandisi muUnited States, izvo uye izvo zvinogona kumiswa kubva kune zvakavanzika chikamu chebrowser marongero.
Firefox yakarasikirwa nevashandisi mamiriyoni makumi mashanu mumakore achangopfuura, uye ndinotenda kuti mafambiro akaita seaya anotipa chete chikonzero cheavo vedu vakasarudza dzimwe sarudzo. Uye, ngazvitaurwe, izvo zvakashata, zvakaipa kwazvo, sezvo iri iyo chete yakavhurwa sosi imwe nzira kune ChromiumAsi ivo vanofanirwa kutora yavo yekumusoro software zvakanyanya uye vasingagumburwe seizvi kana vasingade kuti zvinhu zviwedzere kutowedzera kwavari. Ndiani akakuona uye ndiani anokuona, Mozilla.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mozilla kubva pakuipa kusvika pakuipa: kutanga neFirefox 92, bhurawuza rinoratidza kushambadzira kwakavharwa mumazano
Izvo hazvishande kwandiri, kusvika parizvino ndinoenderera neFirefox, zvakanaka zvese
Iyo webhusaiti panoburitswa chinyorwa ichi (Linux Addicts) inoshoropodza Firefox nekubatanidza kushambadza, apo ino webhusaiti pachayo inosanganisira matatu maAdsense ad mayuniti uye yemamiriro eSeedTag kushambadzira mumufananidzo wekutanga wechinyorwa, zvese muchikamu chepamusoro icho chiitiko chinotora zvese screen uchishandisa 2K resolution resolution, inoratidzawo zvinogumbura (kune vazhinji vashandisi) pop-up hwindo rinokumbira mvumo yekugamuchira zviziviso. Iko kune kwakatonyanya kushambadzirwa pakati pezvinyorwa zvemukati nekusanganisira InArticle kushambadza izvo zvinomanikidza muverengi kuvasvetuka kuti varambe vachiverenga. Musoro wenyaya unogumira pakunakidzwa kwe clicbait neiyo "Mozilla kubva pakuipa kusvika pakuipa" (inosanganisirwa mumusoro we feed), pamwe nemusoro wenyaya peji haufanire musoro wenyaya mune yekunyorera feed uye yechinyorwa kwachinowanikwa kukwezva kutarisisa uye kukonzera kudzvanya uye kushanyira ino saiti.
Firefox neMozilla inoda imwe mari yekubhadhara vashandi vayo vanogadzira uye vatipe browser ine yemahara, yemhando yepamusoro, yemahara software rezinesi iyo inokwikwidzana nehunyanzvi hwepasi rose vane mari yakawanda, vanoshandisa chinzvimbo chavo chikuru mubhizimusi ravo kurwisa avo vakwikwidzi uye shandisa mutero mainjiniya kunzvenga mutero pasi rose.
Sewe mushandisi weFirefox, kana iyi fomu yekushambadza isingaratidzike seinoshungurudza inoshanda kubhadhara chikamu chemitengo uye kuenderera mberi nekuvandudzwa kwayo, inoita kunge isiri yakaipa, sekureba sekuremekedza zvakavanzika zvevashandisi vayo, kusanganisira kugona nyore chiremadza kana mushandisi achidaro. Kwandiri, Firefox ichiri bhurawuza inonyatso kusangana nezvandinoda, zvirinani kupfuura dzimwe sarudzo, kusanganisira iyo inonyanya kushandiswa Chrome, uye imwe yeayo mashoma anoisa pamberi pekuti webhu inoramba yakasununguka uye inoremekedza zvakavanzika.
Zvakanyatsotsanangurwa uye ndinobvumirana newe.
Zvemunyori, ndinonzwisisa kuti bhuku rako nderevanhu, asi ndinodawo kuziva maonero ako, nezve zvakavanzika zveVivaldi uye kuti sei uchida kusiya data rako mumaoko aVivaldi pane Firefox kana imwe yemaforogo
Izvo zvinondipa Vivaldi hazvipi zvinopihwa neFirefox neimwe nzira. Neketani, ini ndinogona kuvhura matatu matabo uye ndoisa iyo interface mune yakazara semi-skrini yekuisa hwindo remupepeti weblog, imwe neruzivo runondinakidza (senge nhau dzebrowser) uye imwe kuti uone izvozvo aiwa Mumwe wandinoshanda naye aburitsa kana ari kutsikisa ichocho chinyorwa. Uyu muenzaniso mudiki.
Nezve iyo data, ndinofunga iwe unoreva kuti Vivaldi haisi yakavhurwa sosi, asi iri 92-94% (haigone kurangarira). Chinhu chete chakavharwa chinongedzo nezvimwe zvinhu zvakaita sezvinyorwa. Yasara iChromium, uye yakavhurwa sosi.
Asi, muchidimbu, ini ndinobudirira zvakanyanya nebrowser ine tsamba, manotsi, tiles windows, ndinogona kubvisa URL bar, iyo ine tabo, raira tambo dzinonditendera kuti nditeme chimwe chinhu chakanangana, zvinonditadzisa kubvuma makuki kubva pamapeji ewebhu ... Firefox inodonha kwandiri. Ini ndakanyora chinyorwa mwedzi yapfuura, uye zvinhu zvave nani.
Iyi Firefox, mumaforamu vanoiti "chinokatyamadza", nekuti ivo vari kungotarisa pane zvauri kutsvaga uye kubva kupi. Kunyangwe iwe uchivimba kana kwete yatove nyaya yekutenda.
Nderipi bvudzi ravakaisa pamunyori, izvo zvinonzi hunyengeri
Pablinux haina muridzi weLinuxAdictos uye haina simba rekuita sarudzo pachinhu ichi. Uye zvakadaro, Actualidad Blog ikambani yekutengesa, kwete isiri-pundutso hwaro.
Ushingi hunotsigirwa neshambadziro, asi haufanire kumisikidza iyo sarudzo kuti uione
Uye, zvinoita sekunge kuti Mozilla Foundation inoda kukwikwidzana neakakura mahombe epasi rose, asi kuti iri kuwedzera kuda kuzvisunga kuGoogle.
Muchidimbu, dambudziko harisi kuti rinouya nekushambadzira here kana kwete, dambudziko nderekuti inogoneswa nekutadza kunyangwe iwe uchigona kuimisa. Dambudziko rakakura kudzvanya kuita kuti sarudzo ishandiswe.
Zviripachena Mozilla yatadza kutonga ... Zvino kana vhezheni yeSnap muUbuntu 21.10 yasvika, Trojan iri kuzopisa.
UseLinuxForPrivacy Chete akadaro
Ini ndinofunga zvakafanana ne pd, hazvindinetse ini kuti Firefox inoisa kushambadza, ini ndinoshandisa Shinga Bhurawuza paWindows uye Firefox paLinux, uye muBrave ini ndinosiya sarudzo kuti undiratidze kushambadza kwakaitwa, kunyanya iyo yemufananidzo wepashure unoshandura yega nguva yandinovhura tebhu nyowani, zvakanaka, zviri nezvandiri kuvatsigira kuti vasatsakatika uye zvese zvinoramba zviri mune imwechete yeGoogle Chrome.
Firefox ndingade kuti iisewo Kushinga kwesitayera, senge yandakangotsanangudza pamusoro, haina kutsamwisa zvachose, ndinoona kushambadzira kwemasekondi mashoma padyo nechizere, uye ndiri kutsigira kurarama kwemahara / kuvhurika source software, uye ini handioni chero chakaipa ipapo.
Ini ndinodzokorora, ndinofunga iwe wanga wakaomarara Pablinux, iyo Firefox haina zvese zveVivaldi (zvinova ndizvo zvayakanakira), hazvireve kuti yakaipa, chinhu chega chandinoshora ndechekuti WebApps haigone kumisikidzwa. Kuchinjira kuFirefox paApple, ndeimwe yevashoma iyo inogamuchira kuiswa kweyekuwedzera seDecentraleyes, Yakavanzika Badger, nezvimwe.
Ongorora: Heino zano raunogona kugadzira chinyorwa, uye nderekuti ini ndinoshandisa iyo "Mbiri Manager" yeFirefox muLinux, iyo inomisikidzwa nekuwedzera "-p -no-remote" pakupera kwe nzira pfupi; Iwe unogona here kuongorora kana izvo zvichiri kushanda nesnap application izvo zvavanotimanikidza kushandisa mune inotevera vhezheni yeFirefox?
Ndiri kungoda kujekesa kuti kana ndichireva kuti ini ndoda kuona kushambadzira mubrowser, kuti HASI kushambadzirwa kwemunhu senge iyo yakabva kuBrave Bhurawuza, HAPANA senge ichi kushambadza YES yakatarwa senge yakaitwa neMozilla, kuti iyi YES inoparadza kuvanzika uye kuburitswa kwedata uye panguva iyoyo ndinobvumirana zvachose naPablinux.
Ndinovimba Mozilla inogadzirisa izvi uye inoisa kushambadzira senge Hushingi HAKUSARUDZWA iwe mubrowser yako.
Chinhu chega chinogona kuponesa Mozilla, mumaonero angu, kuchidzorera mumaoko aVaEich.